Nhau - Tsanangudzo yekushandiswa kwepombi
Kuchengetwa kwepombi yepurasitiki
Imba yekuchengetera inofanirwa kuve inotonhorera, ine mweya uye yakaoma zvakakwana. Kupisa kwakanyanya kwakadzika pamusoro pe + 45 ° C pasina chero kuyerera kwemhepo kunogona kukonzera kusandudzika kusingaperi kwepombi yepurasitiki. Ndokumbira utarise kuti kunyangwe mune yakarongedzwa hosi reel, iyi tembiricha inogona kusvikwa muzuva rakananga. Iyo yekusingaperi stacking kureba inofanirwa kuchinjiswa kune inoenderana chigadzirwa uye ambient tembiricha. Iyo yekuregedza uremu hwe hose reel yakakwira tembiricha yezhizha uye inogona kuora. Izvo zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti hapana kunetsekana mupombi uye nekudaro hapana kushushikana, kumanikidza kana kumwe kushushikana kunogadzirwa, sezvo kushushikana kuchisimudzira deformation nekusingaperi. Zvekuchengetera kunze, hose yepurasitiki haifanire kubhenekerwa nezuva rakananga. Iyo pasuru haifanire kusimbisa iyo hose reel. Zvichienderana nechigadzirwa, hosipaipi yepurasitiki inofanirwa kuchengetedzwa kubva kune yakasarudzika ultraviolet uye ozone radiation.
Kufambisa kwepombi yepurasitiki
Nekuda kwekuenderera kwekufamba, mutoro uri mupombi repurasitiki wakakura zvakanyanya kupfuura iwo unogadzirwa panguva yekuchengetedza. Muchirimo, kupisa kwepanze kwekunze, kupisa kudziya mutiraki uye kuenderera mberi kwekudengenyeka panguva yekutyaira kunogona kukurumidza kutungamira mukugadziriswa kwechigarire kweiyo pombi. Naizvozvo, pakakwirira tembiricha, kukwirira kwesiteki panguva yekuchinjisa kunofanirwa kuve kwakadzika pane kukwirira panguva yekuchengetedza. Panguva yekufambisa, hose yepurasitiki haifanirwe kukandwa, kudhonzwa pamwe nepasi, kupwanywa kana kutsikwa. Izvi zvinogona kukonzera kukuvara kune yekunze dura, uye iyo helix inogona kuumbika kana kutotyoka zvachose. Hatitore mutoro. Kuchenjerera saka kunofanirwa kutorwa kuti kuve nechokwadi chekuti kubata zvisirizvo hakuiti kukuvadza.
Temperature maitiro epurasitiki hosipaipi
Kusiyana nehosi yerabha, kutonhora uye kupisa zvine pesvedzero huru pane hosi yepurasitiki. Pombi yepurasitiki inoshandura kuchinjika kwayo pamwero wepakati kana wakadzika tembiricha yakadzika kana yakanyanya. Pakudzikira kwakadzikira, vanoomesa kudzamara vangova vasina kusimba. Iyo yeplastiki inoyerera nyika inogona kuwanikwa nekupfuura pakakwirira tembiricha padyo nenzvimbo yakanyunguduka yepurasitiki mupurasitiki. Nekuda kwehunhu uhwu, kumanikidzwa uye kutsvaira kwepombi pombi yepurasitiki zvinongoenderana nekupisa kwepakati nepakatipoteredza zve + 20 ° C. Kana tembiricha ikatsauka kubva pakati nepakati kana nharaunda, hatigone kuvimbisa kutevedzera zvakaratidzwa. maitiro ehunyanzvi.
Simba rezuva pane PVC hosipaipi
Ultraviolet radiation kubva kuzuva inorwisa PVC hoses uye inovaparadza nekufamba kwenguva. Izvi zvinoenderana nekureba uye kusimba kwemwaranzi yezuva, iyo inowanzo kuve shoma kuchamhembe kweEurope kupfuura kumaodzanyemba kweEurope. Naizvozvo, iyo chaiyo nguva yenguva haigone kupihwa. Nekuwedzera yakasarudzika UV inogadzikana, iyo brittleness ye UV radiation radiation plastiki hosi inogona kudzikiswa pasi, asi isina kumira zvachose. Izvi zvinogadzirisa zvakare zvinopa kuenderera kwe ultraviolet radiation. Mimwe yemhando yedu yemapaipi yakasungirirwa neaya maVV ekudzikamisa seyakajairwa kuona hupenyu hwakareba hwehusiku muzuva rakananga. Pakukumbira, chero mhando hosipaipi inogona kuiswa neUV zvinogadzirisa pasi pemamiriro ezvinhu.
Pressure uye Vacuum maitiro hosipaipi
Yakajairwa pombi yekumanikidza ndeyemhando dzese, ine machira seanomanikidza anotakura. Dzese hosipaipi yepurasitiki kana yesimbi spirals ndiyo yekugezera hosipaipi. Hosi dzese dzinogona kuchinjwa pakureba uye dhayamita uye dzinogona kumonyorwa kunyangwe mukati mekumanikidzwa kwakatemwa uye nemidziyo yekutsuka. Kunyangwe pazasi pemarabhoritari mamiriro, kureba uye kutenderera kweiyo hosipisi nejira seyakaomeserwa bracket zvakajairwa. Naizvozvo, ese mashandiro ezvinhu anotsauka kubva pane zvakatemwa ane hunyanzvi pane hunhu hweizvi zvigadzirwa. Ose maipi ane spirals asi hapana polyester machira ekusimbisa anongokodzera chete yakamanikana pombi yekumanikidza, asi anonyanya kushandiswa ekushambadzira mafomu. Zvinoenderana nedhizaini, kureba kwemhando dzemapaipi idzi kunogona kugara kuchichinja panguva yekushandisa, kusvika pamakumi matatu muzana ehurefu, kunyangwe mukati meiyo yakamanikidzwa kumanikidzwa uye nemidziyo yekutsiva. Mushandisi anofanirwa kutarisa zvese zvinokwanisika kureba uye pimiyero misiyano uye axial kutsauka kwepombi panguva yekushandisa. Pasi pemamiriro ekushandira, hosipaji haifanire kugadziriswa sepfupi sepombi, asi inofanira kukwanisa kufamba zvakasununguka chero nguva. Muvhu, hosipaipi inogona kungoiswa mumukoto wehukuru hwakakwana. Muchiitiko ichi, zvese zvinokwanisika mutsauko muhose geometry inofanirawo kutariswa. Isu tinokurudzira zvakasimba kuti iwe uone maitiro eiyo pombi inoshandiswa nekutanga kuyedza wozoiisa. Kana hosi yekudzivirira ichishandiswa, kukwirisa uye kumonyanisa pasi pekumanikidzwa kunoguma nekuderera kwehupamhi hwemukati panguva imwe chete. Kune iyo hosi ine simbi sikuruu, iyo sikuru haigone kuteedzera zvakakwana kuderera kwehupamhi hwemukati. Nekuda kweizvozvo, iyo sikuru inogona kupfuura nemadziro epombi kuenda kunze nekuparadza hosipaipi. Nekuda kwekushandisa zvachose muhupamhi hwekumanikidza, isu tinowanzo kurudzira kushandisa machira seicho chaicho chekumanikidza chinotakura hosipaipi. Izvi zvinodzivirira kuwedzeredza kwakanyanya.
Kubva paDIN EN ISO 1402. - 7.3, iyo yekumanikidza kumanikidza kwemhepo yakamanikidzwa uye pneumatic hose yakatemwa panenge pa20 ° C, uye mvura inoshandiswa seyakaomeswa svikiro.
Shandisa hosi yekubatanidza
Mukushandisa kwekukwevera, epurasitiki sikuruu hosi inogona kusanganisirwa nemhando dzakasiyana dzekutengesa zviripo. Mukushandisa, iyo hosipaipi yakakwevedzwa kubatanidzwa uye yakasimbiswa. Mukumanikidza kunyorera, hosi yekunonoka yakanyanya kuomarara uye inoda kuiswa chisimbiso zvachose nekuda kwekushushikana uye dhayamita misiyano. Izvo zvishongedzo zveboka redu rezvigadzirwa 989 zvakagadzirirwa kune yakasarudzika mhando hosipa uye inokodzera kwazvo izvi. Paunenge uchishandisa zvakajairwa zvishongedzo, ndokumbira ubvunze edu akateedzana maitiro kurudziro. Shandisa PVC jira hosipaipi kuti uone kuti iyo groove kuomarara kwechinhu kwacho kwakadzikira zvakanyanya kupfuura kuya kwerabha. Nekuda kweizvozvo, kukosheswa kunogona kunge kusine chero mitsara yakapinza yekubvarura kana uchinge waunganidza mukati mechikamu. Kana hosipaipi yemucheka wepurasitiki yakachengetedzwa kune hosi kukodzera nenzira yekumanikidza katuriji kana hosipaipi, ita shuwa kuti kumanikidzwa kunoiswa nechisimba kwazvo. Zvikasadaro, iyo hosi yakatetepa inogona kukwenya pamusoro pejira nechunongedzo kana hose clip